Tungsten Heavy Alloys - Luoyang kokuzihlanganisa Tungsten-Molybdenum Material Co., Ltd.
kwabantu high, formability kakhulu futhi machinability, oluvelele ukugqwala ukumelana, wemfihlo eliphezulu kuyaqina, umxhwele conductivity ezishisayo futhi ongaphakeme ukunwetshwa ezishisayo. Sethula: tungsten yethu heavy metal Alloys.
zisetshenziselwa "heavyweights" yethu, isibonelo, zezindiza kanye nezindiza mkhathi izimboni, nobuchwepheshe, izimboni yezimoto Foundry noma uwoyela negesi imishini. Thina kafushane samanje ezintathu zalezi ezingezansi:
tungsten yethu heavy metal Alloys W-Ni-Fe futhi W-Ni-Cu abe high density ikakhulukazi (17.0 kuya 18,8 g / cm3) futhi ahlinzeke ukuzivikela okuthembekile ngokumelene-X-ray kanye gamma ngemisebe. Bobabili W-Ni-Fe futhi okungezona kazibuthe impahla yethu W-Ni-Cu asetshenziselwa avikele isibonelo kwisicelo yezokwelapha kodwa futhi ku uwoyela negesi umkhakha. Njengoba collimators e imishini ukwelashwa ngemisebe bona ukuqinisekisa ukuchayeka olunembile. Ngo izinsimbi ngokulingene senza ukusetshenziswa kwabantu high ikakhulukazi of tungsten yethu ingxubevange onesigqi esinamandla. W-Ni-Fe futhi W-Ni-Cu ukwandisa kuphela kancane kakhulu ngamazinga ashisa kakhulu kanye ukudamba ukushisa ikakhulukazi kahle. Njengoba isikhunta ifaka umsebenzi aluminium Foundry, zingase ngokuphindaphindiwe ukufuthelana futhi selehlile ngaphandle kokuba ziyaqothuka.
Esikhathini agesi uketshezi Machining (EDM) inqubo, izinsimbi kuthiwa machined lube sesimweni okwedlulele ngobuciko esebenzisa esithweni kagesi phakathi workpiece kanye electrode. Lapho yethusi graphite electrode akuzona lo msebenzi, ukugqoka ukumelana electrode tungsten-zethusi bayakwazi umshini ngisho izinsimbi kanzima ngaphandle nobunzima. Ngo-plasma spray Imibhobho esemzimbeni ngemboni enamathela, izakhiwo ezibonakalayo of tungsten nethusi futhi umphelelisi komunye nomunye kahle.
Ngesinyenyela metallic tungsten izinsimbi ezisindayo aqukethe izingxenye ezimbili impahla. Ngesikhathi ezimbili isigaba yokukhiqiza inqubo, isisekelo ukungena nakwamanye amazwe sintered is engeyokuqala eyakhishwa kusukela ingxenye ne ephakeme ukuma, isibonelo metal refractory, phambi ikhule ezimbotsheni evulekile bese ngesinyenyela ahlanganisa liquified ne engezansi ukuma. I izakhiwo yezingxenye ngazinye zihlala zinjalo. Lapho ehlola ngaphansi ngesibonakhulu, property ngamunye yezingxenye siqhubeke sobala. Nokho, Ezingeni macroscopic, izakhiwo yezingxenye ngazinye ehlangana. Ngenxa hybrid impahla metallic, indaba entsha okungenzeka mhlawumbe, ifa conductivity ezishisayo entsha futhi ezishisayo ukunwetshwa amagugu.
Liquid izinsimbi isigaba-sintered tungsten-esindayo ekhiqizwa kusukela ingxube izimpushana zensimbi endaweni eyodwa-esiteji inqubo ukukhiqizwa lapho izingxenye nge aphansi ukuncibilika amaphoyinti elicibilikile ungene labo amaphuzu ukuncibilika ephakeme. Phakathi isigaba isibopho, lezi zingxenye yakha Alloys nalabo ukuthi abe ngaphezulu ukuma. Ngisho imali enkulu tungsten elinendawo okusezingeni eliphezulu ukuma, siphela ngesikhathi sesigaba isibopho. liquid isigaba sintered esiyinhlanganisela izinto Plansee sika bazuze ukuminyana le tungsten ingxenye sika, wemfihlo okunwebeka futhi ikhono lokwamukela-X-ray kanye gamma emisebeni lingalimali kuzo zonke nemiphumela ethile engathandeki ehambisana ne-ukucutshungulwa tungsten okumsulwa Ngokuphambene, ukuvaleka kwegebe ukunwetshwa ezishisayo kanye conductivity ezishisayo kagesi kanye ketshezi izingxenye isigaba-sintered incike ngezinga elikhulu kakhulu ukubunjwa abathintekayo esigabeni isibopho.
Emuva-cast izinto kanyekanye hlanganisa izakhiwo impahla izingxenye ezimbili ezahlukene impahla. Kule nqubo, izinto ngokwabo agcinwayo e esimweni saso sasekuqaleni futhi nakanjani ngalesi okuhlangana mncane. I izinsimbi tho e isikhunta ukwakha isibopho ezimbalwa kuphela micrometer ngosayizi. Ngokungafani Welding futhi nokunamathisela ngomthofu amasu, le ndlela uzinzile ikakhulukazi futhi kuqinisekisa elikhulu conduction ezishisayo.
molybdenum, molybdenum Ishidi, molybdenum Rod, molybdenum Plate, Tzm Sheet, Tzm Plate,